Isitolo esidayisa yonke impahla eshibhile eshibilikayo esula ingane Isendlini Alikho Iphunga Lomhlinzeki Nomenzi | Kungcono
Izesula zomntwana ezenziwe ngokwezifiso ezingasetshenziswa ngokwezifiso Azikho iphunga
Ifomula yemvelo, azikho izinongo ezingeziwe, enempilo enganeni. Spunlace indwangu engalukiwe, ethambile futhi enobungane, unakekele isikhumba sengane yakho. Ukusulwa kwezandla zomlomo nezomlomo kuphephile futhi kunobungane, okwenza ingane ibe nempilo nenhlanzeko.
Igama lomkhiqizo: Ingane isula umlomo wesandla
Inombolo imodeli: QMSJ-307
Izinto: Indwangu yekhwalithi ephezulu ethambile engavukiwe
Izithako: Vitamin C, Vitamin E, Xylitol, RO amanzi ahlanzekile, amafutha ezitshalo zemvelo, njll.
Usayizi: 8.75 "* 5.75"
Isisindo (i-Gramme / Square Meter): 45gsm
Izingcezu isikhwama ngasinye: Ama-72 ama-PC
Ukusetshenziswa Okucacile: Ukuhlanza; I-Lanolin egcina umswakama esikhunjeni; Amanzi ahlanzekile agcina umswakama wesikhumba.
MOQ: Amathini angama-5000
Imininingwane yokupakisha： Amakani ayi-24 / ibhokisi
* Ukuze uthole inhlanzeko engcono yengane yakho
Lokhu kusula izandla kwengane kufanele ukusula umlomo nezandla zengane. Isixazululo samanzi esula amanzi siqukethe uvithamini C, uvithamini E, i-xylitol nezinye izithako, ezingathambisa isikhumba ngenkathi zihlanza isikhumba futhi zenze ukondleka kwesikhumba kube nokulinganisela okwengeziwe. Kuyinto enobungane kakhulu futhi iphephile, ngaphandle kokulimala. Izesuli ezimanzi ezihamba phambili zezingane.
Indwangu yekhwalithi ephezulu ye-spunlace engalukwanga ithambe kakhulu futhi ihlanza ngobumnene isikhumba somntwana esibucayi. Lokhu kusulwa kungukusula ingane okungenamakha, kanti ama-wipe angenamakha awekho esimeni esicasula isikhumba sethenda sengane.
* Ithimba lethu
Njengomenzi wokusula okumanzi, IMIKHIQIZO ENGCONO Yansuku zonke C., LTD ijabule kakhulu ukukunikeza ngezinsizakalo ezenziwe ngezifiso, zombili i-OEM ne-ODM ziyatholakala. Njengokubuyekezwa nokusetshenziswa kokuhlanzwa kwabantwana, ungahle ube nezidingo eziningi zokuhlanzwa kwabantwana. Ngifuna ukukutshela ukuthi sizoba umlingani wakho ofanele. Sineqembu lokucwaninga lokukhiqiza elisebenzayo, iqembu lokuthengisa, futhi futhi sineqembu lokwakha lobuchwepheshe.
Mhlawumbe unemibono yakho ngokujiya nosayizi wezinto ezisula izingane, inani lokusula iphakethe ngalinye, nefomula yesixazululo. Sicela usitshele futhi sikusize ukuthi wakhe umkhiqizo omusha sha. Singalalela ngokugcwele iziphakamiso zakho ngokubambisana nawe futhi sinikeze imibono ephelele neyobungcweti.
Sikholwa ukuthi ngemizamo yethu esabelana ngayo, nakanjani sizokwenza imikhiqizo emihle kakhulu futhi eyigugu. Siyethemba ukuthi esikwenzayo akugcini ngokukhiqiza umkhiqizo womntwana kuphela, kodwa ukuletha impilo enempilo, ehlanzekile nenempilo kubantu. Sithemba ukusiza ukuthuthukisa izinga lempilo laso sonke isintu. Asenzi nje umkhiqizo, kepha senza okuthile okunengqondo ngaphezu komkhiqizo uqobo.
Sicela uyigcine lapho izingane zingafinyeleli khona ukuvimbela ukugwinya.
Gcina ngobumnene endaweni eyomile ngevolumu
Lo mkhiqizo awuncibiliki emanzini, sicela uwubeke kudoti ngesikhathi
Inothi elikhethekile: Uma unenkinga yokungezwani komzimba nezinto ezithile, sicela umise ukusetshenziswa ngokushesha futhi ufune ukwelashwa.
Langaphambilini Ukuhlanza ngobumnene phansi amajazi asula ngendwangu yekhwalithi ephezulu ye-spunlace engalukanga
Olandelayo: Ukusula okumanzi kuqukethe uvithamini E no-C Supplement umsoco ebusweni ukususwa kwezimonyo okusebenzayo
ama-antibacterial baby wipes
Ukusula Izandla Zengane
Ingane isula umlomo wesandla
Izesuli Ezimanzi Ezihamba Phambili Zengane
Ukusulwa Kwengane Okubolayo
ukuhlanza ngama-baby wipes
Amanzi Wokusula Izingane
Amanzi Osula Izingane Asuselwa Emanzini